Amin'ny maha fitaovana lehibe fanadiovana ao an-trano azy ireo - ny fanadiovana ny banga, mitana andraikitra lehibe tokoa izy io, saika ny fianakaviana tsirairay avy dia fitaovana ilaina. Ny vacuum cleaner dia tena mora ampiasaina, fa maro ny olona tsy mankafy fanadiovana sy fikojakojana ny fanadio. Andao hianarantsika ny fomba fanadiovana sy fitazonana ny fanadiovan-drivotra amin'ny Xiaobian. tranokala marika www.chinApp.Com China
1. Diovina ao anaty siny ara-potoana ny masinin-masoandro sy ny kojakoja fanangonana vovoka, diovy ny tadin'ny vovoka sy ny kitapo aorian'ny asa tsirairay, zahao raha misy ny perforation na ny fivoahan'ny rivotra, ary diovy tsara ny vovoka sy ny kitapo misy vovony sy rano mafana, ary tsofy maina izy ireo. Fady mafy ny mampiasa vovo-tany sy kitapo vovoka maina.
2. Hamarino raha simba ny tadin'ny herinaratra sy ny plug. Aorian'ny fampiasana azy dia atsofohy ao anaty bundle ny herinaratra ary ahantona amin'ny faritry ny saron-doha.
3. Aorian'ny fitrohana ny rano dia zahao ny fidiran'ny rivotra raha simba na simba, raha tsy izany diovy izy ary zahao ilay onja mitsingevana raha simba.
4. Ny milina dia tokony hokarakaraina am-pitandremana ary tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny hery ivelany.
5. Rehefa tsy miasa ny masinina dia tokony hapetraka amin'ny toerana misy rivotra sy maina izy io.
6. Rehefa manadio ny masinina dia azafady amin'ny lamba lena misy rano na detergent tsy miandany. Fady mafy ny mandroboka anaty rano amin'ny lohan'ny motera lehibe ho fanadiovana. Aza mampiasa detergent manimba toy ny lasantsy sy rano akondro, fandrao vaky ny akorany
7. Aza mitazona ny milina amin'ny fanjakana miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Azafady mifehy ny ora fiasana mitohy ao anatin'ny 2 ora, raha tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny masinina.
8. Rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny mpanadio banga, hihena ny suction noho ny fanakanana ny harato ny lamba sivana. Mba hisorohana ny fitetezana suction, ny lamba famafana sy ny kitapo lamba dia tokony diovina matetika amin'ny rano, ary avy eo maina amin'ny toerana mangatsiaka mba hampiasaina indray hamerenana ilay suction.
9. Raha mafana ny motera lehibe, manome fofona mandoro, na misy hovitrovitra sy feo tsy tokony ho izy, dia tokony halefa hamboarina ara-potoana fa tsy terena hampiasaina.
10. Aza aforeto matetika ny fantsona, aza aforitra ary aolaho.
11. Ny toerana misy ilay mpanadio banga dia tsy tokony hapetraka amin'ny toerana mando na manimba araka izay azo atao, ary ny toerana misy rivotra madio dia tokony hofidina hisorohana ny fahasimban'ny vatana
Aorian'ny fampidirana ny Xiaobian, tokony ho fantatsika ny fomba fanadiovana ilay mpanadio vacuum.